Ogologo oge ole ka ọ ga-ewere ọnọdụ na nsonaazụ ọchụchọ Google? | Martech Zone
Mgbe ọ bụla m kọwaara ndị ahịa m ogo m, ana m eji ihe atụ nke agbụrụ ụgbọ mmiri ebe Google bụ oke osimiri na ndị niile na-asọmpi gị bụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ. Somefọdụ ụgbọ mmiri ka ibu ma ka mma, ụfọdụ agba ochie ma ọ fọdụ n’elu mmiri na-ese. Ka ọ dịgodị, oké osimiri na-akpụ akpụ dị ka nke ọma… na oké ifufe (algọridim mgbanwe), mmiri na ebili mmiri (search ewu ewu crests na troughs), na N'ezie na aka iso ewu ewu nke gị onwe gị ọdịnaya.
E nwere oge ụfọdụ ebe m nwere ike ịchọpụta oghere ndị na-enye anyị ohere ije ije n'ụzọ ziri ezi ma jupụta ụfọdụ ọhụhụ ọchụchọ ọchụchọ, mana ọ na-achọkarị oge iji hụ ihe na-eme na ụlọ ọrụ ndị ahịa, ụdị mbọ ndị asọmpi ha na-agba, na otu ikike algorithm siri gbanwee site na mgbanwe algorithm na nsogbu ahụike saịtị.
Dabere na Ahrefs, naanị 5.7% nke ibe ọhụụ ga-enwerịrị ogo na nsonaazụ 10 kacha elu na Google n'ime otu afọ.
Dabere na Ahrefs, naanị 0.3% nke ibe ọhụụ ga-enwerịrị ogo na nsonaazụ 10 kacha elu na Google n'ime otu afọ maka isiokwu kachasị asọmpi.
Dabere na Ahrefs, naanị 22% nke ibe ndị toro na nsonaazụ Top 10 na Google ka e bipụtara n'ime otu afọ.
Ọ bụ ezie na nke ahụ na-ada mba, ọ bara uru ịlụ ọgụ. Anyị na-ebido ndị ahịa anyị site n’ịchọpụta mkpụrụ okwu mpaghara na ogologo ọdụ ebe enwere ụfọdụ visibiliti nyocha yana isiokwu ndị ahụ na-egosi ebumnuche gbasara ịzụrụ. Anyị nwere ike nyochaa asọmpi ahụ, chọpụta ebe a na-akwalite ibe ha (backlinked to), chepụta ibe ka mma yana ozi ọhụụ na mgbasa ozi (eserese na vidiyo), mgbe ahụ anyị na-arụ nnukwu ọrụ na-akwalite ya. Ọ bụrụhaala na saịtị ndị ahịa anyị dị mma gbasara Webmasters, anyị na-ahụkarị ka ha nọrọ na elu 10 n'ime ọnwa ole na ole.
Ma nke ahụ bụ organic anyị wedge. Isiokwu ndị dị ogologo-ọdụ na-elekwasị anya na isiokwu dị n'etiti wee nyere saịtị ahụ aka na njikọta isiokwu ndị ọzọ. Anyị na-aga n'ihu itinye ego na ịkwalite peeji ndị dị ugbu a nke na-aharịrị yana ịgbakwunye peeji ọhụrụ nke na-ekpuchi isiokwu ndị ga-enyere aka. Ka oge na-aga, anyị na-ahụ ndị ahịa anyị ka ha na-aga n'ihu n'okwu asọmpi asọmpi, na-agbakarị asọmpi n'ime otu afọ ma ọ bụ abụọ. Ọ dịghị mfe ma ọ bụghị ọnụ, mana ịlaghachi na itinye ego n’ego dị ịtụnanya.
Otu esi eme ngwa ngwa na Google:
Chọpụta gị saịtị ahụ bụ ngwa ngwa, na-eji netwọkụ nnyefe ọdịnaya, mkpakọ onyonyo, mkpakọ koodu, na mkpuchi.
Chọpụta gị Ezubere nke ọma, dị mfe ọgụgụ, ma na-anabata nha ihuenyo dị iche iche.
Nyocha obodo na ogologo-ọdụ Keywords ndị na-adịghị asọmpi ma ọ ga-adị mfe ọkwa.
Zụlite ọdịnaya nke ahụ pụrụ iche, na-atọ ụtọ, ma zuo ezu na isiokwu ị na-achọ ịdọta uche maka.
tinye eserese, ọdịyo, na vidiyo ọdịnaya iji mee ka ibe akwụkwọ na-adọrọ adọrọ.
Gbaa mbọ hụ na ederede ederede gị nke ọma yana isiokwu kwesịrị ekwesị, akụkụ n'akụkụ, na ndị ọzọ Ihe HTML.
Gbaa mbọ hụ na ibe gị nwere a nnukwu aha nke ahụ metụtara isiokwu ndị ị na-achụ.
Gbaa mbọ hụ na gị nkọwa nkọwa ga-eme ka ịmata ihe wee mee ka ihu akwụkwọ gị pụọ na ndị ọzọ na Search Results Results Page (SERP).
Na-akwalite ọdịnaya gị na saịtị ndị nwere njikọ azụ gaa na peeji ndị ọzọ maka isiokwu ndị yiri ya.
Na-akwalite ọdịnaya gị n'ime ụlọ ọrụ forums na site na email na mgbasa ozi. Nwedịrị ike ịchọrọ ịkpọsa.
Na-aga n'ihu na-emeziwanye ọdịnaya gị na-aga n'ihu asọmpi.
Obi dị m ụtọ, algọridim Google agbanweela ngwa ngwa karịa blackhat organic search ndụmọdụ nwere… yabụ anaghị iku mmadụ na-ezitere gị email na-agwa gị na ha nwere ike ị nweta na peeji nke. Buru ụzọ rịba ama na ha enweghị ntụzi aka banyere isi okwu ị lekwasịrị anya, na inwere ike ịtọala na ibe maka okwu aha, ndị asọmpi gị nwere ike ịbụ, ma ọ bụ otu ị ga-esi gosipụta nloghachi na ntinye ego. Ọtụtụ mgbe, ọrụ ndị a ga-ebibi ikike gị ịkwado ogologo oge site na imebi usoro ọrụ Google na ịme ka ngalaba gị pụta. Na idozi saịtị ntaramahụhụ siri ike karị karịa ogo nnukwu!
Nnukwu ogo chọrọ njikarịcha nke saịtị, gụnyere ọsọ peeji, nzaghachi na nha ihu nha dị iche iche, ịba ụba nke ọdịnaya ahụ, yana ikike maka ibe ahụ ịkekọrịta ma kpọtụrụ ya site na saịtị ndị ọzọ dị mkpa. Ọ bụ njikọta nke njirimara ọ bụla na saịtị yana - ọ bụghị naanị na-arụ ọrụ ọ bụla. Nke a bụ nkọwa zuru ezu, Ogologo oge ole ka ọ na-ewe na Google?
Site n'aka: Otu weebụsaịtị
Tags: ahrefsalgọridimnjikọ azụisiokwu ndorondorogoogle ogootúOgologo oleotúHTML ihemmụba ogoisiokwu ogoogologo-ọdụ Keywordsnkọwa nkọwanhazi ọkwanyocha ọchụchọn'usoroogoalgorithm ogoogo iheAọsọ ọsọìgwè weebụsaịtịaha